Hoa Súng: ý nghĩa, cách trồng, chăm sóc trong chậu và bể cá | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Hoa Súng: ý nghĩa, cách trồng, chăm sóc trong chậu và bể cá | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ukuba i-lotus inobuhle obuhloniphekileyo kunye nobuhle, ithathwa njengentyatyambo yesizwe yaseVietnam, i-lily yamanzi kunye nobuhle bayo obucocekileyo kunye ne-rustic yenza abantu abaninzi bathandane. Kukho iintlobo ngeentlobo zeenyibiba zamanzi: iinyibiba zamanzi zaseThai, iinyibiba zamanzi amfusa, iinyibiba zamanzi amhlophe, njl. njl., kwaye uhlobo ngalunye lunobuhle nentsingiselo yalo. Makhe sifumanise nge-KHBVPTR malunga neenyibiba zamanzi, intsingiselo yazo kunye nendlela yokukhulisa iinyibiba zamanzi kwiimbiza nakwii-aquariums ezingezantsi.
1 Intsingiselo yenyibiba yamanzi
1.1 Intsingiselo yenyibiba yamanzi ngokwe-feng shui
1.2 Intsingiselo yenyibiba yamanzi kumazwe ahlukeneyo
1.3 Intsingiselo yenyibiba yamanzi ngombala
2 Iimpawu ze-lily yamanzi
3 Zeziphi ixesha lonyaka apho iinyibiba zamanzi zidubula?
4 Ukuhlelwa kweenyibiba zamanzi
4.1 Thailand amanzi lily
4.2 Japanese amanzi lily
4.3 Inyibiba yamanzi amhlophe
4.4 Inyibiba yamanzi emfusa
5 Uzikhulisa njani iinyibiba zamanzi ezimbizeni nakwii-aquariums
5.1 Ukukhetha umhlaba kunye neembiza
5.2 Khetha imbewu yenyibiba yamanzi
5.3 Isikhokelo sokuTyalwa
6 Indlela yokunyamekela iinyibiba zamanzi kwiimbiza
6.1 Umhlaba wokutyala
6.4 Ubungakanani bamanzi
7 Ukusetyenziswa kwenyibiba yamanzi
7.1 Isetyenziselwa ukuhlobisa, ukwenza imifanekiso yangaphakathi
7.2 Umphumo wokuphilisa
7.3 Yisebenzise ekuphekeni ukutya
Intsingiselo yenyibiba yamanzi
Njengentyatyambo enobuhle obungeyonyani nobunyulu obusuka kumazwe aseAsia, iinyibiba zamanzi ziyathandwa ngabantu abaninzi. Kwaye njengeerozi, iinyibiba zamanzi zineentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo zomfuziselo, umbala ngamnye unentsingiselo yawo. Masifumanise nge-KHBVPTR kanye ngezantsi.
Intsingiselo yenyibiba yamanzi ngokwe-feng shui
Ngokutsho kwe-feng shui, i-water lily yintyatyambo ezisa inhlanhla, impumelelo kunye nenkqubela phambili ebomini. Umfanekiso wenyibiba yamanzi uphakama phakathi kodaka kunye namanzi, uzisa iintyatyambo ezinobuhle obucocekileyo kunye nephunga elimnandi.
Ke ngoko, ukukhula kweenyibiba zamanzi endlwini kuya kuzisa amandla amahle, ukunciphisa amashwa kubanini bezindlu. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba zininzi iintlobo zeenyibiba zamanzi: iinyibiba zamanzi ezimfusa, iinyibiba zamanzi ezityheli, iinyibiba zamanzi amhlophe, njl., kufuneka ubeke ingqalelo ekukhetheni umbala ochanekileyo ukuzisa inhlanhla.
Intsingiselo yenyibiba yamanzi kumazwe ahlukeneyo
Kwilizwe ngalinye elahlukileyo, inyibiba yamanzi inentsingiselo yayo yokomfuziselo:
AmaYiputa amandulo anxulunyaniswa nentsomi yokunikela ngeenyibiba zamanzi zoMnayile kuthixo welanga ukubonisa imbeko. Ke ngoko, iinyibiba zamanzi zihlonelwa kakhulu eYiputa. Inyibiba yamanzi ifuzisela ubuhandiba, ubuhle obunyulu kunye nobona bulumko.
Ngokutsho kwengcamango yabantu baseMpuma, i-lily yamanzi ifanekisela ubuhle bomphefumlo, ongumfanekiso we-lily yamanzi ephuma emanzini, ngokuzidla nangobungangamsha. Ukongeza, kukwathethwa ukuba ukukha iinyibiba zamanzi ebusuku kuya kuzisa ithamsanqa kwabo babathandayo.
EVietnam, iinyibiba zamanzi zihlala zihlala kumachibi, amachibi, kunye nemigxobhozo, kodwa iinyibiba zamanzi zisabonakala, ziyaqhakaza kwaye zizele bubomi. Ngoko ke, i-lily yamanzi ifanekisela ukucoceka, ukungaphumeleli kunye nobomi obugcweleyo.
Intsingiselo yenyibiba yamanzi ngombala
Okwangoku, iinyibiba zamanzi zikhuliswa kwaye zilinywe kakhulu, ngoko zinemibala emininzi eyahlukeneyo. Nangona kunjalo, umbala ngamnye unentsingiselo yawo yokomfuziselo:
Inyibiba yamanzi amhlophe: Ifanekisela ubuhle bobunyulu, ubunyulu nobumsulwa ebomini.
Inyibiba yamanzi emfusa luphawu lothando oluthembekileyo, ukuncamathela kunye nothando olufanayo.
Inyibiba ebomvu yamanzi: Ibonisa amandla, umdlandla kunye namandla.
Inyibiba yamanzi etyheli: Ifuzisela imali, ithamsanqa kunye nobuhandiba. Ihlala isetyenziselwa ukukhula kwii-aquariums okanye ukunika izalamane ngezihlandlo ezikhethekileyo.
Inyibiba eluhlaza okwesibhakabhaka: Uphawu lwethamsanqa, amandla kunye namandla endalo.
Iimpawu ze-lily yamanzi
Lithini igama lesiNgesi lenyibiba yamanzi? Zivela phi iinyibiba zamanzi? Masifumanise nge-KHBVPTR kanye ngezantsi.
Esi sisityalo sasemanzini, igama lezenzululwazi yiNymphaea Spp, yosapho lweNymphaeaceae. Igama lesiNgesi nguNunephar, inzalelwane yase-Asia, e-Australia kunye naseMelika eneentlobo ezingaphezu kwama-200 ezahlukeneyo. Iinyibiba zamanzi zikholisa ukuhlala kumachibi, amachibi okanye kwimigxobhozo.
Inyibiba yamanzi sisityalo esihlala ixesha elide, esihlala sikhula emanzini, luhlobo lwerhizome ende erhubuluzayo. Amagqabi enyibiba yamanzi anendawo enye, arawndi, kwaye amaxesha amaninzi aneencam ezicandekileyo. Umphezulu wamagqabi we-waterlily ugudile, uluhlaza oluhlaza, indawo ephezulu yegqabi ineemithanjeni ezivelele, ezikhanyayo.
Iinyibiba zamanzi ziyi-7-15cm enkulu, zinemibala emininzi: emhlophe, emfusa, eluhlaza okwesibhakabhaka, ebomvu, njl njl. Iintyatyambo zineepistils ezininzi ezicwangciswe ngokujijekileyo, umbindi wesikhumba wahlula kwikhompatimenti. Iinyibiba zamanzi ezintle kakhulu zinamaphiko afanayo kunye nephunga elimnandi elikhanyayo. Iinyibiba zamanzi zahlulwe zibe ziindidi ezimbini: iinyibiba zamanzi ezikwaziyo ukunyamezela kubanda ezidubula emini kuphela kunye neenyibiba zamanzi akweleenjiko anokudubula emini nasebusuku.
EVietnam, iinyibiba zamanzi zihlala zihlala kumachibi, amachibi kunye nemigxobhozo. Ukongeza, abantu abaninzi bakhulisa iinyibiba zamanzi ezihonjisiweyo ekhaya okanye kwi-aquariums ukuzisa i-feng shui kwaye bahlambulule amanzi. Kwaye iDong Thap Muoi likhaya lawona machibi amakhulu enyibiba eVietnam.
Zeziphi ixesha lonyaka apho iinyibiba zamanzi zidubula?
Ukuba uyazibuza ukuba linini ixesha lenyibiba yamanzi e-Huong Pagoda okanye ixesha leenyibiba zamanzi aseNtshona, fumana ngezantsi. Ngononophelo olulungileyo, iinyibiba zamanzi zinokuqhakaza unyaka wonke, zenza ivumba elimnandi lokukunceda uphumle kwaye uhlambulule amanzi.
Nangona kunjalo, iinyibiba zamanzi zihlala zidubula ekwindla, malunga noSeptemba ukuya kuNovemba. Ngoko ke, ukuba unethuba lokuya kumaphondo asentshona: i-Dong Thap, i-An Giang ekwindla, uya kubona amasimi eenyibiba zamanzi ezityatyambile kwikona yesibhakabhaka kwaye ujabulele ukutya okuvela kwi-lily yamanzi.
Ukuhlelwa kweenyibiba zamanzi
Ngokuxhomekeke kwimvelaphi kunye nombala, iinyibiba zamanzi zahlulwe zaba ziindidi ezininzi ezahlukeneyo. Nazi ezona ntlobo zixhaphakileyo:
Thailand amanzi lily
I-Thai mini water lily yintyatyambo engumxube engeniswe eVietnam, iintyatyambo zidubula unyaka wonke, kulula ukukhula. Iintyatyambo zineepistil eziphuzi, amaphiko emibala eyahlukeneyo: emhlophe, ebomvu, emfusa, njl njl. I-Lily yamanzi yaseThai inamandla okukhula ngokukhawuleza, ngoko ikhethwa ngabantu abaninzi.
Japanese amanzi lily
Ngokungafaniyo nenyibiba yaseCan Tho yamanzi eVietnam, inyibiba yamanzi yaseJapan inemibala emininzi: ebomvu, emfusa, emhlophe, … iintyatyambo zinokudumba – zisonge kaninzi (ngokuqhelekileyo zidubula emini kwaye zivale ebusuku). Iintyatyambo zidla ngokudubula unyaka wonke, zikhule kakuhle kwaye zinike iintyatyambo ezintle. Nangona kunjalo, le ntyatyambo iyaxhathisa kwizichumisi zemichiza, ngoko kufuneka ulumke xa utyala.
Inyibiba yamanzi amhlophe
Ithathwa njengentyatyambo yokukhanya kunye nokucoceka, i-white water lily ithandwa ngabaninzi. Iintyatyambo zibhityile, zikhaphukhaphu, zimthubi, zijikelezwe ngamagqabi. Iintyatyambo zidla ngokuphuma emanzini xa zidubula. Kwaye iintyatyambo zihlala zidubula ekwindla, malunga noSeptemba-Novemba.
Inyibiba yamanzi emfusa
Inyibiba yamanzi emfusa isoloko ikhula kwimigxobhozo, iipetali ziba mfusa oluhlaza kwaye ngokuthe ngcembe zibabomvu ukuya kwiincam zamagqabi. I-pistil ibomvu tyheli, iipetali zijijekile kunye, zigqume i-pistil. Iintyatyambo zinevumba elithozamisayo elithandwa ngabantu abaninzi.
Uzikhulisa njani iinyibiba zamanzi ezimbizeni nakwii-aquariums
Nazi iindlela zokukhulisa iinyibiba zamanzi ezimbizeni kwireferensi yakho:
Ukukhetha umhlaba kunye neembiza
Umhlaba kufuneka ukhethwe ucocekile, okanye womiswe elangeni ngekalika kunye nomgquba weetapile ezibolileyo ukususa zonke izitshabalalisi kunye nezifo. Emva koko hluza yonke igrit, igrabile okanye amatye ukunceda isityalo ukufunxa lula izondlo.
Iimbiza zenyibiba zamanzi kufuneka zikhethe ezo zenziwe ngesamente, imvelaphi, njl., ezinomthamo omhle wokubamba amanzi. Inomlomo ongange 30-45cm, ubunzulu obuyi 15-25cm ukuze umthi ukhule. Qaphela ukuba uthenga imbiza enemingxuma, ungasebenzisa i-burlap okanye iingxowa ezisezantsi ukunceda ukugcina umhlaba kunye namanzi ngaphakathi.
Khetha imbewu yenyibiba yamanzi
Iinyibiba zamanzi zinokukhuliswa kwiibhalbhu okanye imbewu. Ungathenga imbewu yenyibiba yamanzi okanye ii-tubers kwiindawo zokuqandusela, ngoko ke khetha iindidi ezifanayo ezingenazinambuzane kunye nezifo.
Nangona kunjalo, abantu bahlala bekhula iinyibiba zamanzi kunye ne-bulbs kuba zikhawuleza, zinciphisa umngcipheko wezityalo ezifileyo kwaye ziqinisekisa ukukhula okulungileyo.
Emva kokuthenga iibhalbhu, sebenzisa isikere ukucheba iingcambu ezindala kunye namagqabi. Emva koko utyale isibhamu ebhodweni, ngoko beka ii-tubers emphethweni webhodwe ukwenzela ukuba yenze i-angle ye-45-degree kwi-pot.
Emva koko gcwalisa imbiza ngamanzi kwaye uyinakekele de isityalo sikhule kunye neentyatyambo.
Indlela yokunyamekela iinyibiba zamanzi kwiimbiza
Nangona isisityalo esilula ukusikhulisa nokusinyamekela, ukusinceda ukuba sidubule unyaka wonke, kufuneka uqaphele oku kulandelayo:
Njengesityalo sasemanzini esihlala sihlala emachibini, amachibi okanye kwimigxobhozo, indawo yokuhlala yeenyibiba zamanzi kufuneka ibe nodaka, kunye nobunzulu be-30-40cm, iqulethe ezininzi izondlo. Kwaye ukuphakama ukusuka kwi-petiole ukuya kumphezulu wamanzi malunga ne-4 – 10cm.
Musa ukutyala nzulu kakhulu okanye udaka oluninzi kuba oko kuya kubangela ukuba isityalo sivelise amagqabi amaninzi kunye neentyatyambo ezincinci.
Iintyatyambo kunye neenyibiba zamanzi kufuneka ziqinisekise ukukhanya kweeyure ezi-6-8 / ngosuku kwi-photosynthesis. Ngoko ke, ukuba ukhulisa izityalo kwiimbiza, kufuneka ukhuphe izityalo rhoqo ukuze zome elangeni (umda xa ilanga lishushu ukusuka kwi-11am ukuya kwi-3pm) ukunceda isityalo sivelise iintyatyambo ezininzi.
Musa ukushiya isityalo endlwini ixesha elide, iintsuku ezininzi kakhulu kuba iya kubangela ukuba isityalo sife okanye singadubi.
Kufuneka ugcine ubushushu obufanelekileyo ukuze isityalo sikhule kwaye sikhule ukusuka kwi-16 ukuya ku-30 ​​degrees celsius.Musa ukwandisa ubushushu kakhulu, kuya kwenza ukuba isityalo sife okanye sicothe, okanye ukuba kubanda kakhulu, isityalo asiyi kukhula ngokukhawuleza. intyatyambo..
Ngenxa yokuba isityalo sasemanzini, kufuneka uhlale uqinisekisa ukuba inani lamanzi ebhodweni lilingana nokuphakama kwamasebe. Musa ukuvumela imbiza yome, iya kubangela ukuba isityalo sife.
Izondlo ezaneleyo kufuneka zongezwe kwisityalo ukuze sikhule kwaye siphuhlise. Phambi kokutyala, fakela ngesichumiso setapile esibolileyo okanye isichumiso esiphilayo. Emva koko, rhoqo emva kweenyanga ezi-1-2, kufuneka uchume kube kanye ukuze isityalo sikwazi ukufunxa izondlo kunye neentyatyambo ezintle.
Ukusetyenziswa kwenyibiba yamanzi
Nangona iyintyatyambo eqhelekileyo kubantu baseVietnam, ayinguye wonke umntu owaziyo malunga nokusetyenziswa okukhethekileyo kwenyibiba yamanzi. Jonga ngezantsi:
Isetyenziselwa ukuhlobisa, ukwenza imifanekiso yangaphakathi
Kule mihla, iinyibiba zamanzi zithandwa ngakumbi ngokutyalwa kumachibi, amachibi, iimbiza okanye ii-aquariums, zombini zinegalelo ekucocweni kwemithombo yamanzi kunye nokukwazi ukuhombisa indawo yakho yekhaya.
Ngokukodwa, iinyibiba zamanzi ziintyatyambo zasemanzini ekulula ukuzikhulisa nokuzinyamekela kodwa zizisa iintyatyambo ezintle, ezidubulayo. Nceda udale indawo yobugcisa kunye neyokuphumla kwintsapho.
Akunjalo kuphela ukusetyenziswa kokuhlobisa kunye nokuhombisa endlwini, kodwa i-lily yamanzi yenye yezinto ezixabisekileyo zokulungiselela amayeza esintu:
Unyango lweentlungu ezisezantsi: sebenzisa i-200g yamanzi e-lily, i-Ha Thu O, i-Pi Xiu, ubukhulu obuthathu. I-Decoction kwiyeza lokusela, kanye ngenyanga inceda ukunyanga isifo ngokufanelekileyo.
Ukunyangwa kwezifo eziphazamisayo, ukweba ukubila: i-400g yamanzi e-lily, i-800g yee-tubers eziphekiweyo, ezixotshiweyo. Emva koko zomise ezi ntlobo zimbini uze uzicole zibe ngamaqhekeza amancinci. Sebenzisa i-10g ngexesha ngalinye ukupheka isidudu esikutyayo.
Nciphisa ukutshiswa lilanga: Ukusebenzisa i-lily yamanzi ukupheka iti ehlotyeni kunceda ukunciphisa ukutshiswa ngokufanelekileyo.
Ukunyanga ukhohlokhohlo, umqala obuhlungu: Iigabhu zenyibiba zamanzi omileyo ziphekwa ukufumana amanzi emva koko zixutywe neswekile ukuze zisele. Kufuneka usele rhoqo 2-3 amaxesha / imini ngokuqhubekayo iintsuku ezi-5 kuya kuzisa ukusebenza.
Yisebenzise ekuphekeni ukutya
Ukongeza ekusebenziseni iinyibiba zamanzi ngeenjongo zokuhombisa okanye zonyango, i-lily yamanzi ikwasetyenziselwa ukucubungula izitya ezininzi ezimnandi: cela i-lily yamanzi, isuphu emuncu, njl. Ngokukodwa, ukuba unethuba lokuza eNtshonalanga yomlambo, Wena. kufuneka uzame izitya ezikhethekileyo ezenziwe ngeenyibiba zamanzi apha.
Enyanisweni, i-lily yamanzi ayinayo kuphela ubuhle obucocekileyo kwaye obulula kodwa inentsingiselo enzulu ye-feng shui. Ndiyathemba ukuba oku kwabelana kungasentla kuya kukunceda ukhulise ezona mbiza zibalaseleyo zeenyibiba zamanzi.
bona Okuninzi >> Intsingiselo yeLotus? Iimpawu, iziphumo, indlela yokukhulisa kunye nokukhathalela i-lotus